Hydra needle roller-Ubuhle umatshini accessory-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
IKHAYA>IMVELISO>Isixhobo somatshini wokuhombisa
IHydra yenaliti eqengqeleka
IHydra Roller isetyenziselwa ukukhuthaza ukuveliswa kwe-collagen kunye nokunyusa ukufakwa kweemveliso zokukhathalela ulusu. Thelekisa i-derma roller yendabuko, kulula ukusebenza, awudingi sandla okanye mncedisi wokukunceda ufumane ulwelo olunobuso ebusweni.
Le hydra roller intsha enamabhotile aphumeleleyo dibanisa inaliti encinci enesiphene seoli kwaye ayingenise ngokuzenzekelayo. Akukho mncedisi kufuneka, okanye uye ekliniki uyokwenza unyango lwe-hydra roller. Ungayenza ekhaya ukusukela ngoku! Ekhaya i-microneedle ineenaliti ezincinci kakhulu kunezixhobo ezikwiofisi ye-dermatologist, ngenxa yoko akufuneki ukuba zonakalise.
1. Hlamba ulusu lwakho ngamanzi afudumeleyo.
2. Thatha phezulu umfaki-sicelo ucofe malunga nemizuzu engama-5-8 ngotywala.
3. Hlamba umfaki sicelo ngesiselo esinxilisayo.
4. Beka ubungakanani bento elulwelo kwi-vial yesicelo. Isikulufa sibambe ngokucophelela umva kwiVali. Nyusa kancinci i-vial 2-3 amaxesha.
5. Susa isiciko sokhuseleko kunye nococeko.
6. Qengqeleka esikhumbeni ngasemva nangaphambili 4-5times. Hambisa i-roller kwimikhombandlela emine. Gcina isantya kunye noxinzelelo loxinzelelo ngokwenza njalo iinqanawa ezincinci.
Uncedo lweHydra Roller:
-Ekulula kwaye kusebenza ngokufanelekileyo
Inkqubo yokuqengqeleka eshushu
-Ukuhamba okungabhaliswayo ngokucinezela amandla
-Ukutyibilika, ukunyibilikisa amandla, ukuhlaziya kwakhona, iprinking pore
- Amabala asebusweni, iinyawo zamakhokho, ukuphakamisa ubuso ...
Ubungakanani beenaliti: 0.25 / 0.5 / 1.0mm, ubude obu-3 bokukhetha
Izinto zenaliti: ial titanium alloy
Inombolo yenaliti: 64pin
Ububanzi bepine: 0.25mm
Izinto zebhotile: iglasi
Umthamo webhotile: 10ml
Ubungakanani bephakheji: 12 * 8 * 2.5cm3
Ubunzima bebonke: 0.05kg
I-808 808nm diode laser yokukhupha inwele laser ixabiso lomatshini njenge-800
Ukubuyisela umva kwintlungu ye-pneumatic acoustic wave shockwave umatshini wokunyanga i-aswt